★မြန်မာ့အလင်း★: ရုပ်အဆင်းချို့တဲ့သော ကျွန်ကုလားတွေ စစ်ဗိုလ်ဟန်ဆောင် ပြန်ပြီ
ရုပ်အဆင်းချို့တဲ့သော ကျွန်ကုလားတွေ စစ်ဗိုလ်ဟန်ဆောင် ပြန်ပြီ
မဟာမြန်မာဆိုတဲ့ စစ်ဗိုလ်ဟာ အရမ်းကို ဆိုးသွမ်းနေပါတယ်။ သူဟာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ပြစ်သတ်မယ် ပြောပါတယ်။ ဒီမိုသမားတွေကို နှစ်ပြားမတန်အောင်လဲ ပြောပါတယ်။ ဘယ်လောက်အထိ အတင့်ရဲလာလဲဆိုရင် ကရင်မိသားစုအသတ်ခံရတာကို အားရ၀မ်းသာ ပြောဆိုနေပါတယ်။ ကရင်နဲ့ ဗမာအကြား ပြဿနာဖြစ်အောင် တမင်လုပ်ကြံပြောတဲ့ အပြောဆိုတာ သိသာလှပါတယ်။ အဲဒီကတည်းက ဒင်းဟာ စစ်ဗိုလ်အစစ်မဟုတ်နိုင်ပဲ. . . ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါ ချို့တဲ့နေတဲ့ ကျွန်ကုလားဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ။ ကျွန်ကုလားတွေဟာ စစ်သားဟန်ဆောင်လိုက်၊ ဒီမိုဟန်ဆောင်လိုက်၊ ကရင် ဟန်ဆောင်လိုက်၊ ခရစ်ယာန် ဟန်ဆောင်လိုက်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဟန်ဆောင်လိုက်နဲ့ ရန်တိုက်ပေးတာ များခဲ့ပါပြီ။ အခုအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်တာကို သိသိကြီးနဲ့ ၂၀၁၀ကို ထောက်ခံနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေကို ဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး သွေးခွဲနေတာပါ။ ပိတောက်မြေ ဆီပုံးမှာ ဒင်းနဲ့ စကားပြောကြည့်တော့ သူက စစ်သားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ထိုင်းမှာနေတဲ့ သာမန်ပြည်သူဆိုပဲ။ အဲလောက်အရှက်ကင်းပြီး ဗြောင်လိမ်ရဲတဲ့ ကျွန်ကုလားပါပဲ။ အောက်မှာ ကျွန်ကုလားနဲ့ စကားပြောထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
စာဖတ်ပြီး မေ့မပြစ်ပါနဲ့… စစ်သားတွေအနေနဲ့ အဲလို စစ်သားဟန်ဆောင်ပြီး သွေးခွဲတဲ့ အပြုအမူကို ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားပေးကြပါဦး။ ကျုပ်တို့ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကျွန်ကုလားတွေဟာ ကျုပ်တို့ရဲ့ ရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာ ခေါင်းထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားကြပါ။ မုဒိမ်းကောင် ကြာကူလီတပည့်တွေကို မကြောက်ပါနဲ့။ ကျုပ်တို့တွေက အိမ်ရှင်ပါ… ကျုပ်တို့ရဲ့ အရိပ်ကို ခိုကပ်နေတဲ့ ဧည့်သည်ကို ကြောက်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်စောက်သုံးမကျလို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျုပ်တို့တွေ လူညီရင် ဒင်းတို့ အီးတောင်ပေါက်ရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (စာကိုအောက်မှ အထက်သို့ ဖတ်သွား၇န်)
13 Aug 10, 01:02
မဟာမြန်မာ: : zinmoeminlatt@gmail.com
13 Aug 10, 01:01
13 Aug 10, 00:59
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: တော်တော့ကွယ်။ အဲလောက်စောင့်ပြီးမှ.. အသံထွက်လာတာ.. စိတ်မရှည်ဘူး။ ကော်မန့်မှာ မင်းအကြောင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ဦးမယ် :P ဒန်..ဒန်..ဒန်
13 Aug 10, 00:58
(ကျွန်ကုလား ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ သွေးလေ ခြောက်ခြားပြီး ၆ မိနစ်ကျော် ငြိမ်သက်နေပြီးမှ ထွက်လာတဲ့စကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်)
13 Aug 10, 00:56
ဇော်မျိုး>သခင်ကိုရွှေဂျူး: ကျွန်ကုလားကို လုပ်ထည့်လိုက်တာ.. အသံတောင်မထွက်တော့ဘူး.. နည်းနည်းလွန်သွားလားမသိဘူးနော် :P
13 Aug 10, 00:54
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: ဟေ့ကောင်.. ကျက်သရေ တပြားသားမှ မရှိတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်နဲ့ ကျွန်ကုလား.. ဘယ်ရောက်သွားလဲ?
13 Aug 10, 00:52
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: ဟဲဟဲ။ ငါ့ကိုယ်ငါအထင်ကြီးတာလဲ မပြစ်မပြောနဲ့။ ကုလားကို လုပ်ပေးလိုက်တာ.. ကုလားသူ့ကိုယ်သူ ပြန်ဆဲကုန်ပြီ
13 Aug 10, 00:51
13 Aug 10, 00:50
13 Aug 10, 00:49
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: ကျွန်ကုလား… မင်းငါ့မေကိုမပြစ်မှားနဲ့… မင်းအဖွားစအိုပေါက်ကို အာရပ်မုဒိမ်းကျင့်တာ သမိုင်းရှိတယ်။ အာရပ်မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ မျိုးဆက်မိုလို့မင်းတို့ကောင်တွေ ကျက်သရေတုံးနေတာကွ
13 Aug 10, 00:48
13 Aug 10, 00:47
13 Aug 10, 00:46
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: မအေလိုး ကျွန်ကုလား.. မင်းမျက်နှာကို မှန်ထဲမှာသွားကြည့်စမ်း.. စောက်ကျက်သရေတုံးနေတာ မြင်လိမ့်မယ်။ အဲလိုဖြစ်နေတာ ၀မ်းမနည်းဘူးလား? စိတ်ထားယုတ်တော့ ကျက်သရေယုတ်မှာပဲ။ အဲဒါနားလည်သလား?
13 Aug 10, 00:45
13 Aug 10, 00:44
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: စောက်ပိုတွေမပြောနဲ့ ကျွန်ကုလား။ ငါမေးတာပဲဖြေ.. ပြည်သူတွေကို ပြစ်သတ်ဖို့ စစ်သားလေသံနဲ့ ဘာလို့ပြောခဲ့လဲ?
13 Aug 10, 00:42
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: မအေလိုးကျွန်ကုလား… ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်.. စစ်ဗိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့.. ၂၀၁၀ကိုတော့ထောက်ခံတယ်တဲ့။ ဒါဆိုရင် ပြည်သူတွေကို ပြစ်သတ်ဖို့ စစ်သားလေသံနဲ့ ဘာလို့ပြောခဲ့လဲ? ဖြေစမ်း.. ကျွန်ကုလား
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: မအေလိုး.. စအိုပေါက် မုဒိမ်းကျင့်ခံထားရတဲ့ ကုလားက ရာရာစစ.. ငါ့ကိုပြန်ပြောနေတယ်။ မင်းကိုယ်မင်းကုလားလို့ဝင်မခံပဲ ကုလားကိုဆဲပြနေတယ်ပေါ့? နေပါဦး ပြည်သူတွေကို ပြစ်မယ်ဆိုတာ ဘာကိစ္စပြောနေတာလဲ?
13 Aug 10, 00:39
13 Aug 10, 00:38
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: ငါမေးတာဖြေစမ်းပါ။ စစ်ဗိုလ်မဟုတ်ပဲ ဘာအတွက် ၂၀၁၀ကို မျက်ကန်းထောက်ခံပြီး လူတွေကို စစ်ဗိုလ်လေသံနဲ့ သေနတ်နဲ့ပြစ်ဖို့ပြောနေတာလဲ? ဖြေစမ်း.. စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ကျွန်ကုလား
13 Aug 10, 00:36
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: စောက်ပိုတွေမပြောနဲ့ ကျွန်ကုလား။ ကုလားစောက်ကျင့်ကို ကောင်းကောင်းသိတယ်။ မင်းတို့လိုကောင်တွေ ကျက်သရေမရှိတဲ့ ရုပ်အဆင်းရတာနည်းသေးတယ်
13 Aug 10, 00:35
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: ဟေ့ကောင်.. ကျက်သရေ တပြားသားမှ မရှိ.. စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်.. ခွေးဝဲစားလောက်တောင်ကြည့်မကောင်းတဲ့ ကျွန်ကုလား.. မင်းက သိပ်ပြီး မြန်မာဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့? ဖြေစမ်း
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်? ဒါပေမယ့်နအဖ 2010 ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် တဖက်သတ်ကြီးပြောပေးနေတယ်? ဟဲဟဲ.. ကျွန်ကုလား.. စစ်ဗိုလ်မဟုတ်ပဲ ဘာကြောင့် ၂၀၁၀ ကိုထောက်ခံပေးနေတာလဲ?
13 Aug 10, 00:33
13 Aug 10, 00:32
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: ဟေ့ကောင်.. မင်းက ကုလား.. ကုလားက ကုလားကိုပြန်ဆဲနေတာ.. စောက်ရူးပေါ့
13 Aug 10, 00:31
မဟာမြန်မာ: ကုလားကိုပြန်ဆဲတဲ့ကောင်တွေကို ကျွန်လို့ခေါ်ရင်မင်းကကျွှန်ပေါ့
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: ဟဲဟဲ.. ဘာလဲ.. မင်းက နအဖ စစ်ဗိုလ်လို့ သိပ်ပြီးအထင်ခံချင်နေတယ်ပေါ့?
13 Aug 10, 00:30
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: မင်းတို့ကောင်တွေ စောက်ကျင့်က တစက်မှမကောင်းတော့.. စော်ကခွက်တွေက ခွေးဝဲစားလောက်တောင် ကျက်သရေမရှိဘူးဖြစ်နေတာကွ။ အိမ်ရှင်ကို အမျိုးမျိုးအကောက်ကြံတဲ့ မင်းတို့ကောင်တွေ လူမွှေးကတော့ လုံးဝပြောင်လာမှာ မဟုတ်ဘူး
13 Aug 10, 00:29
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: ကရင်ကိုအဲလောက်ဒေါသထွက်ပြနေတော့ မင်းက နအဖလူဖြစ်သွားရောလား? ဖြေစမ်း.. မင်းအဖွားစအိုပေါက်ကို မုဒိမ်းကျင့်ခံထားရတာကို စိတ်မနာတဲ့ ကျွန်ကုလား .. ငါမေးတာဖြေစမ်း
13 Aug 10, 00:27
ဇော်မျိုး>မဟာမြန်မာ: ဟေ့ကောင်ကျွန်ကုလား .. စအိုပေါက်ကို မုဒိမ်းကျင့်ခံရတာကို စိတ်မနာတဲ့အပြင်ကို ကုလားကိုပြန်ဆဲတဲ့ကောင်တွေကို ကျွန်လို့မခေါ်ရင် ဘယ်သူ့ကိုခေါ်ရမလဲ?
13 Aug 10, 00:18
13 Aug 10, 00:15
မဟာမြန်မာ: ခွေးနှင့်လူစီးချင်းထိုးစရာမလိုပါငါကကရင်ကိုခွေးလို့ဘဲသဘောထားသူပါ ခွေးကိုခွေးအချင်းချင်းဘဲပြန်ကိုက်ခိုင်းတာကောင်းပါတယ်ခွေးတွေအချင်းချင်း ကိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာခွေးမျိုးအလိုလိုတုံးသွားမှာပါ
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 7:12 AM